ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိုင်ထွန်းသည် KMD Co., Ltd မှ Director ဦးဇော်လှိုင်ဘွား ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိုင်ထွန်းသည် KMD Co., Ltd မှ Director ဦးဇော်လှိုင်ဘွား ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်များအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Individual Trading Card) ရှိသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို ကြက်သွန်နီ တင်သွင်းခွင့်ပြု
ပြည်တွင်း ကြက်သွန်နီ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိသဖြင့် ကြက်သွန်နီကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် စားဖိုဆောင်သုံး သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများ အသင်း၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင် ထုတ်ပေးလျက်ရှိရာမှ ယခုအခါ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်သည် K AND K CO., LTD (Japan)မှ President ဖြစ်သူ Mr. Kaku Ryoji ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်သည် K AND K CO., LTD (Japan)မှ President ဖြစ်သူ Mr. Kaku Ryoji နှင့် O.J.C Co.Ltd မှ Director ဖြစ်သူ Mr.Kim Jun Suk ဦးဆောင်ေ သာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်တွင်...
ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းသည် International Leadership Academy မှ Director ဖြစ်သူ Mr. Richard Dare ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းသည် International Leadership Academy မှ Director ဖြစ်သူ Mr. Richard Dare ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီအချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် ABB Alliance Brewery Company Limited မှ Ms. Zita Schellekens, Corporate Relations Director ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ၁၅း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် ABB Alliance Brewery Company Limited မှ Ms. Zita Schellekens, Corporate Relations Director ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမတွင်...
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Ms. Lisa Weedon ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Ms. Lisa Weedon ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ(၄/၂၀၁၅) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ၁၃း၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ(၄/၂၀၁၅) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် တက်ရောက်...
ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းမှ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ များတွင် စီးပွားရေးသံမှူးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော စီးပွားရေးသံမှူး (၉) ဦးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းမှ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ များတွင် စီးပွားရေးသံမှူးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော စီးပွားရေးသံမှူး (၉) ဦးအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ၁၄း၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံ
ယခင်ကနိုင်ငံခြားသား ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်မပြုဘဲ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်းများအရလည်းကောင်း၊ လက်ရှိ ပြောင်းလဲလာသော စီးပွားရေးအခြေအနေများအရ နိုင်ငံခြားမှ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr.Gautam Mukhopadhaya အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr.Gautam Mukhopadhaya အား ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ၁၂း၀၀ နာရီအချိန်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံ